Portal:Woqooyiga Ameerika - Wikipedia
Portalka Woqooyiga Ameerika
Deegaanada, maamulada, iyo wadanada ka tirsan ama hoos yimaada Qaarada Waqooyiga Ameerika waxaa ka mid ah:
Minneapolis ( i/niˈæpəlɪs/), sida saxda ah loo yaqaano Caasimada Minneapolis waa xarunta Hennepin County, mid ka mid ah Magaalooyinka Mataanaha iyo mida 14aad ee shabakada magaalooyinka waaweyn ee wadanka Maraykanka, midaasi ooy ku nool yihiin dad ka badan 3.8 milyan. Sanadkii 2014ka waxaa magaalada Minneapolis lagu magacaabay caasimada ugu weyn gobolka Minnesota, iyo mida 46aad eegu baaxada weyn wadanka Maraykanka; midaasi oo leh shacab dhan 407,207. Minneapolis waxay dul taala gebiyada Webiga Mississipi, waxayna dhinaca ku heysaa magaalo madaxda gobolka ee Saint Paul. Magaaladani waxay qani ku tahay biyoha ayadoo leh harooyin badan oo ku wareegsan, webi iyo biyo dhacyo badan. Waxay sidoo kale ahaan jirtey caasimada soo saarista daqiiqda iyo burka, iyo alwaaxa. Maantana waxay tahay xarun ganacsi oo u dhexeeya Chicago iyo Seattle, ayada oo xarun u ah qaar badan oo ka mid ah shirkadha ugu waaweyn wadanka Marayknaka ee loo yaqaano Fortune 500. Dhinaca kale, caasimada Minneapolis iyo nawaaxigeedu waxeey hooy u tahay Soomaalida ugu badan ee ku dhaqan guud ahaan wadanka Maraykanka iyo qaarada Waqooyiga Amerika ooy ka mid tahay wadanka Kanada. Hennepin County oo kali ah ayaa waxa degan ilaa 45,500 oo Soomaali ah, kuwaasi oo ku dhaqan darajooyin kala duwan ee nolosha Minneapolis. Tusaale ahaan, xaafada koonfurta Minneapolis iyo Cedar waxaa si khaas ah u degan Soomaali, waxaanad wadooyinka xaafadaas ku arki kartaa Soomaali tuban ama ku caweeynaya agagaarka xaafadahooda. Sidoo kale masaajido badan iyo suuqyo balbalaadhan ayaa meelo badan ugu yaala Soomaalida magaaladaas. Xildhibaano, saraakiil, askar iyo shaqaale dowlo oo kala duwan ayay Soomaalidu ka qabatey magaalada Minneapolis iyo nawaaxigeeda. Sidoo kale, sanadkii 2014 waxaa dhowr nin oo Soomaalida Maraykanka isku soo sharaxeen doorashooyin ka dhacayay gobolka Minnesota kuwaasi qaar ka mid ahi ku guuleysteen jagooyin aad u sareeya.
Xuquuqda sawirka: Library of Congress
Muuqaalka Farasmagaalka Magaalada Minneapolis ee wadanka Maraykanka halkaasi oo ku dhaqan yihiin tiro dad Soomaali oo gaadhaya ilaa 70,000 qof.
Juquraafi Afrika Antarktika Aasiya Kaaribiyaan Yurub Oceania Latin Ameerika
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Woqooyiga_Ameerika&oldid=167399"
Last edited on 10 Maarso 2017, at 08:35
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Maarso 2017, marka ee eheed 08:35.